on November 12, 2016 Related - For the record Myat Shuu
ဥပမာ – အေ၀မ်းတင်မောင်ရဲ့ “ချစ်တယ်” တို့၊ “လူပျိုပေါက်” တို့ သီချင်းတွေ တယ် နားမတွေ့လှဘူး။ ခေတ်ဟောင်းသီချင်းပါမက ငွေရတု၊ ရွှေရတု ခေတ်က ရုပ်ရှင်ကားတွေဆိုရင်လည်း ကျမအနေနဲ့ မက်မက်စက်စက် ရှိပါတယ်။ စစ်ကြိုခေတ်က ဇာတ်ကားတွေကို ဒီဗီဒီကူးပြီး ပို့ပေးမယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အသိအကျွမ်းဖြစ်ရသူ မမလွင်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရပါသေးတယ်။
ကျမ နားထောင်တဲ့ ခင်မောင်ရင့်ရဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ “လောကနိဗ္ဗာန်” သီချင်းဟာလည်း တပုဒ် အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်မောင်ရင်နဲ့ စုံတွဲ ဆိုတာက မေမေ၀င်းပါ။ ခင်မောင်ရင် မေမေ၀င်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများက ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်ကားကို ပြေးမြင်မှာပါ။ သုံးပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းမှာ ပရိသတ်ရဲ့ အသည်းနှလုံးကို လူဆိုးလုပ်ရတဲ့သူက စွဲဆောင်ယူငင်သွားနိုင်ပုံကို ကြည့်ရင် ခင်မောင်ရင်တို့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ပုံများ တသသကို ဖြစ်ကရောပဲ။ ဂီတာသောင်းရေးတဲ့ “မြရဲ့ ဆယ့်နှစ်လရာသီ” သီချင်းလေး (B.B.R. 1154. 1940) ဆိုရင်လည်း နားထောင်ရတာ လွမ်းစရာလိုလို ဆွေးစရာလိုလိုလေး။ ဗိုလ်အောင်ဒင်မှာ မြ ဆိုသွားပုံလေးက ကရုဏာသက်စရာလေး။
ခင်မောင်ရင် - ဘိုးဘိုးအောင်
ခင်မောင်ရင် - နဂါးနီ